Madaxweyne Erdogan Oo Digniin Culus U Diray Syria Iyo Sababta Keentay - Awdinle Online
February 5 , 2020 (Awdinle Online) –Madaxweynaha Turkey Recep Tayyip Erdogan ayaa ugu baaqay Syria inay ciidamadeeda kala baxdo goobaha kormeerka militari ee gobolka waqooyiga bari ee Idlib, halkaasi oo iskudhacyo xooggan ay ka dhaceen maalmihii tagay.
“Xilligan, laba ka mid ah 12-keena goobood ee kormeerka waxay ka dambeeyeen qadadka taliska Syria. Waxaan rajeeneynaa inay ka hor bisha Febraayo ay halkaas kala baxaan ciidamadooda,” ayuu Erdogan u sheegay xubno ka mid ah xisbigiisa AKP oo uu la kulmay.
“Haddii taliska Syria aysan ciidamadooda la bixin, Turkey waxaa waajib ku ah inay arrintan gacmaheeda wax uga qabato” ayuu yiri Erdogan.
Sideed qof oo askar Turkish iyo shacab ahaa ayaa Isniintii lagu dilay magaalada Idlib kadib rasaas ka timid ciidamada Syria.
Turkey ayaa jawaab ay bixisay ku dishay ugu yaraan 13 askari oo Syrian ah, sida ay sheegeen kooxaha la socda dagaalka Syria.
Madaxweyne Erdogan ayaa Russia, oo ah dalka ugu weyn ee taageera madaxweyne Bashar Al-Assad, ku dhalleeceeyey inay ku guul-darreysatay inay nabad ka dhaqan-geliso gobolka.
“Hadda kadib iskama indha tiri doonno tallaabo kasta oo burineysa heshiiska,” ayuu yiri madaxweyne Erdogan.
Previous articleAskar ku dhega beeshay weerarada Al shabaab oo la gudoonsiiyay Qalabka maqalka fudideeya.
Next articleAkhriiso :-Coronavirus oo Magac cusub oo loo bixinayo